isiphatho esinye sokuhlambela isepha itephu ye-chrome
Isikhuseli se-chrome lokucoca isitovu sokuphatha enye ye-WOWOW iza nesithinteli se pop-up esiphuphumayo. Le ndawo yokumisa pop-up yakha umanyano omnye kwindawo yakho yokuhlambela isitulo esinye, ukwenza ifuthe elingakumbi ekhitshini lekhitshi lakho. Esi sixhobo sokumisa intsholongwane sinokusebenza ngokulula ngomatshini omnye. Ifuna kuphela a
uxinzelelo oluncinci ukuze lusebenze. Ngenxa yoyilo lwayo olusebenzayo, inokuhambisa amanzi kude kwigumbi lakho lokuhlambela ngokukhawuleza kwaye ngokuzolileyo.
 Elona xabiso liphezulu lemali
 Ukusebenza gudileyo kokuhamba kwamanzi
 Uyilo olwahlukileyo nolukhethekileyo
Izixhobo eziphezulu zokusebenza
- Ibandakanya ukufaka ngokwakho-ngokwakho
I-SKU: 2321501C iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Ukucofa igumbi lokuhlambela kwigumbi lokuhlambela elifanayo tags: gqiba upolitwe, isikulufu esixhonyiweyo, Isandla esisodwa